Jiheeye qaxooti oo eey la jiraan ka qeybgalayaal ku sugan dabeecadda
Masawirqaade: Mikael Lindahl
Ururrada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa ururrada ka caagganaanta khamriga, ururrada kaniisadaha madaxabannaan iyo ururrada shaqaalaha. Ururka ka caagganaanta khamriga ayaa ugu horeeyay. Waxay u shaqaynayeen sidii dadku u yaraysan lahaa cabbida khamriga. Ururka kaniisadaha madaxabannaan waxay ahaayeen urur bulsho oo masiixi ah. Horay ahaantii waxeey u dagaalami jireen waxaa ka mid ahaa in dadka dhamaantood helaan xaqqa codeeynta. Ururo bulsho oo badani waxay u dagaalamayeen sidii dadka oo dan u heli lahaayeen waxbarasho. Maanta waxay ururo bulshadeed badani ka shaqeeyaan arrimo siyaasadda la xiriira. Waxaa kaloo jira ururo bulshadeed isku beddelay oo hey’ado, sida khasnadda shaqala’aanta, a-kassan. Dhaqanka in si wadajir ah loogu shaqeeyo isbeddel weli waa uu ka jira bulshada iswiidhishka. Maantana sidaas ayee ururo badan u shaqeeyaan.
Dhalinyaro ku sugan goobta xilli firaaqaha
Dhalinyaro ciyaarhanno kubadda cagta ah ee uu la socdo hogaamiye
U gudub cutubka ku xiga >